I-Casa dos Vinhos - eduze kwaseTomar. Iphuli yangasese. - I-Airbnb
I-Casa dos Vinhos - eduze kwaseTomar. Iphuli yangasese.
Madalena, Tomar, i-Portugal
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Amanda
Uma ubheka phezu kwezihlahla zomnqumo, i-A Casa dos Vinhos inendawo yedolobhana. Nakuba ekuqaleni sasiyindlu, lesi sakhiwo sasisetshenziselwa ukwenza nokugcina iwayini iminyaka eminingi.
Kukhona indawo ye-patio ebiyelwe kanye nendawo ekhethekile, ebiyelwe yokubhukuda. Jabulela ukuphumula kuma-sun-lounger noma ukuthatha idiphu.
Ikhishi lifaka i-microwave, umshini wekhofi nomshini wokuwasha izitsha. Kukhona irempu esuka ku-drive futhi wonke amagumbi afinyeleleka ngezihlalo zabakhubazekile. Kuneshawa enkulu yokungena ukuze wenze ukuphila kube lula kuzo zonke izivakashi zethu.
Indlu, ichibi kanye ne-driveway kungokwakho kuphela.
I-pool iyi-8m x 5m. Ukujula kusuka ku-1.4m - 1.5m
4.76 · 49 okushiwo abanye
I-Charneca do Maxial iyidolobhana lasemaphandleni elithule, eli-6km eningizimu yedolobha lomlando laseTomar. Imakethe encane yasendaweni ikuhambo lwemizuzu emi-2.
I-Convento do Cristo e-Tomar iyindawo okufanele uyibone, ngokuziqhenya ebheke idolobha lasendulo elingezansi.
Indlu itholakala umzila ohambayo weCaminho Central Português olungele ukuphumula okuzuzwe kahle!
Ichibi elihle eliseCastelo do Bode liqhele ngamakhilomitha angu-9.5 kuphela futhi lihlinzeka ngezindawo zokubhukuda, ukuhamba ngezikebhe nezindawo zemidlalo yamanzi kanye namabhishi athule.
Kunohlu olubanzi lwezitolo ezinkulu eTomar, kanye namathofi amaningi, imigoqo kanye nezindawo zokudlela.
Ngihlala eduze namakati ami, izinja nezikhukhukazi ezi-5 - konke kubiyelwe ngokuphephile, kodwa ngihlala ngijabule ngokwenza abangani. Ngokuvamile uyongithola ngisebenza engadini yemifino, ngivuna izithelo noma iminqumo, noma ngilusa izinkukhu.
Ngizokubingelela ngemva kokufika kwakho, lapho kungenzeka khona, futhi ngikubonise indawo. Ngeke ngikuphazamise ngaphandle kokuthi udinga okuthile noma ufise ingxoxo! Ungathumela umyalezo, ushayele ucingo noma uvele ushayele uma ngibona engadini. Ngihlale ngijabule ukusiza.
Ngihlala eduze namakati ami, izinja nezikhukhukazi ezi-5 - konke kubiyelwe ngokuphephile, kodwa ngihlala ngijabule ngokwenza abangani. Ngokuvamile uyongithola ngisebenza engadini y…
Inombolo yepholisi: 92339/AL